Uyenza njani i-Indent yokuHamba kwiLizwi 2007 Umhlathi
ILizwi 2007 linokuxhoma ubume bomhlathi ngamnye owuchwethezileyo. A i-indent ejingayo kukungeniswa ngaphakathi apho umgca wokuqala unamathela ngasekhohlo kwaye wonke umhlathi ungenisiwe. Ukuba neLizwi lixhomeke kwaye ubeke indent kumhlathi, kuya kufuneka ugcwalise amanyathelo amahlanu alula.
1Beka indawo yesikhombisi kumhlathi ofuna ukuwuxhoma kunye ne-indent.
Indent yokuxhoma yindlela elungileyo yokwazisa uluhlu lomhlathi. I-indent exhonyiweyo yinyani ye-indent-yonke into-kodwa-yeyokuqala-umgca-we-kumhlathi uhlobo loqheliso.
MbiniCofa indawo yokuKhangela iphepha kwiRibhoni.
Ufumana i-indent kunye nomhlaba phakathi kwe-Paragraph.
3Vula ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko ngokunqakraza kwiqhosha leDialog Box Launcher iqhosha kwikona esezantsi ekunene yeqela loMhlathi.
Uninzi lwemiyalelo yokufomatha umhlathi ifuna ukuba ufake amaxabiso, ke ulawulo olugqibeleleyo lukwibhokisi yencoko yababini yomhlathi.
4Kwindawo yokubonisa, khetha uQingqo khetho kuluhlu olukhethekileyo lokuhlahla.
Ibhokisi ngokuzenzekelayo ifunda i-0.5 ″, oko kuthetha ukuba iLizwi ngokuzenzekelayo lixhoma kwaye lifake umhlathi kwisiqingatha-intshi. Faka elinye ixabiso ukwenza i-indent yakho ibe mbi ngakumbi okanye inciphe.
Ibhloko ekhethiweyo yokubhaliweyo, okanye umhlathi okhoyo ngoku kunye nemihlathi esele uyichwethezile, zonke zinendawo yokuma ejingayo.
umgubo wealmond endaweni yomgubo wekhokhonathi
isetyenziselwa ntoni i-fetzima
Uxinzelelo phantsi kwembambo
uqhagamshela njani kwi-vpn
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-lexapro kwabasetyhini
yintoni igama eliqhelekileyo lecymbalta
promethazine vc codeine isiraphu